Medical Writings for Over 18: Q and A Over 18 Readings (125)
1. ကိုယ်ဝန်ကို ကိုယ့်ဘာသာဆေးသုံးဖျတ်တာက အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသလား။
2. isoprostol Administration ဆိုတာဘာဆေးလဲဆရာ
3. ဆရာရှင့် သမီးအသက်က 22 နှစ်ပါ။
4. ရာသီလာပြီးတစ်ပတ်မှာ လိင်ဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန်မရေစဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။
5. ၂၂-၂-၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ သမီးမေးတဲ့မေးခွန်းမှာပါတဲ့ အဖြူဆင်းတဲ့အကြောင်း
6. ကျနော်နဲ့ ကျနော်ကောင်မလေး အတူနေခဲ့တာကြာပါပြီ။
7. ကျွန်တော်က အသက် ၂ဝ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။
8. ကျွန်တော့နာမည် (့) ပါ။(အသက် ၂၅)၊
9. I have seen the following document titles from your Q and A over 18 Reading
10. သမီးအသက်က ၂၃ နှစ်ပါဆရာ။
11. I hereby attached the following to get the urgent help from you, please.
12. ဆရာ နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့ နာပေးပါရှင်။
14. ကျွန်တော် အမည်က (့)။ အသက်က ၄၇ နှစ်ပါ။
15. ဆရာရေးထားတဲ့ ပြက္ခဒိန်တွက်နည်းအရ ရာသီမလာခင်(7)ရက် နဲ့ လာပြီး(7)ရက်မှာ
Thu, Feb 21, 2013 at 11:55 PM
ကိုယ်ဝန်ကို ကိုယ့်ဘာသာဆေးသုံးဖျတ်တာက အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသလား။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ဆီးစစ်တဲ့နည်းကလွဲလို့ ဘယ်နည်းနဲ့အစောဆုံးသိနိုင်ပါသလဲ။ Ecee2 သောက်တာများရင် ရာသီရက် အများကြီးနောက်ကျတတ်လားဆရာ။
Abortion Complications ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲများ Thu, Feb 21, 2013 at 11:02 PM
isoprostol Administration ဆိုတာဘာဆေးလဲဆရာ ဆရာရေးထားတဲ့စာထဲကအရဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဖြတ်ဆေးပေါ့နော်။ အဲ့ဆေးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရပါသလားဆရာ နောက်ပြီးအဲ့ဆေးကဘာအတွက်သုံးလို့ရပါသေးသလဲ သားအိမ်ခေါင်ကင်ဆာကာကွယ်ဆေးက သွေးစစ်ပြီးမှာထိုးရတာလားဆရာ မစစ်ဘဲထိုးလည်းရလားဆရာ ဆရာ့အတွက်ကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေ်
မြန်မာပြည်မှာ ဝယ်လို့ ရ-မရ ဆရာမသိပါ။ ဆရာက အထဲမှာ မနေရပါ။ ရမယ်ထင်ပါတယ်။
HPV Vaccine for young women သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး Medical abortion (1) ကိုယ်ဝန်ကို ဆေးသုံး ဖျက်ခြင်း (၁) Thu, Feb 21, 2013 at 9:49 PM
ဆရာရှင့် သမီးအသက်က 22 နှစ်ပါ။ သမီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲမေးမယ်နော်။ ဆရာလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေလို့ရအောင်။ သမီး အမျိုးသားကလေ သူ့အင်္ဂါကြီးအောင်ဆိုးထိုးချင်တယ်တဲ့။ ပြောလို့လည်းမရဘူး ဆရာ။ သမီးက စိုးရိမ်လို့ပါ။ စာတွေလည်းဖတ်ဖူပါတယ်။ အဲလိုထိုးလိုက်လို့ ကြာရင်ခံစားမှုမရှိတော့တာတွေ ပိုးဝင်သွားတာတွေ ကလေးမရနိုင်တော့တာတွေဖြစ်မှာစိုးတယ်။ အဓိကကတော့ ကလေးမရနိုင်တော့မှာကိုပါ။ သမီးတို့မှာ ကလေးမရှိသေးပါဘူး။ မယူသေးတာပါ။ လိုချင်တဲ့အချိန်ကျတော့မှ မရမှာစိုးတယ်။ တကယ်လို့ ဆရာဝန်နဲ့ သေသေချာချာဆေးထိုးမယ်ဆိုရင်ကော ရနိုင်လား။ ရေရှည်မှာကော ကောင်းပါ့မလား။ ထိုးဆေးမဟုတ်ပဲ သောက်ဆေး၊ လိမ်းဆေးကော ရှိပါသလား။ ရှိရင် ဆေးနာမည်နဲ့ ဝယ်လို့ရနိုင်မယ့်နေရာကို ပြောပြပေးပါနော်။ဆေးတော့မထိုးစေချင်လို့ပါ။ အဖြေကို ဆရာ့ဆိုဒ်တွေမှာတော့ ရှာမဖတ်ခိုင်းပါနဲ့နော်။ ဆရာကိုယ်တိုင်ပဲဖြေပေးပါ။ ပြီးတော့ တစ်နေ့ကို ကော်ဖီ ၃ခွက်ထက်ပိုသောက်ရင် ကလေးမရနိုင်ဘူးလို့ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။ သမီးက ကော်ဖီအရမ်းသောက်လို့ပါ။ သမီးမေးထားတာတွေ ဖြေပေးပါနော် ဆရာ။ ဆရာ့မေးလ်ကို စောင့်နေပါ့မယ်။ ကျေးဇူးပါ ကျားလိင်အင်္ဂါဆေးထိုးတာ လုံးဝအားမပေးပါ။ ဆရာဝန်အစစ်တွေကထိုးမပေးပါ။ နောင်မှာ လူစဉ်မမှီဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ကလေးမရနိုင်တာထက် စိတ်ဆင်းရဲရနိုင်တယ်။
Penile Injection Therapy ကျားလိင်အင်္ဂါ ဆေးထိုးခြင်း Penile Penicillin Injection ကျားလိင်အင်္ဂါ ဆေးထိုးခြင်း (၂) Sat, Feb 23, 2013 at 5:32 PM
ရာသီလာပြီးတစ်ပတ်မှာ လိင်ဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန်မရေစဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ (100%) စိတ်ချရပါသလား။
Calendar method ပြက္ခဒိန်နည်း Sun, Feb 24, 2013 at 11:14 AM
၂၂-၂-၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ သမီးမေးတဲ့မေးခွန်းမှာပါတဲ့ အဖြူဆင်းတဲ့အကြောင်း အဖြေပါမလာလို့ ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မေးလို့ စိတ်မရှိပါနဲ့ဆရာ။ ယခု သမီးမှာ အဖြူတွေဆင်းပြီး ရင်တွေတုန် ကိုယ်လက်မအီမသာနဲ့ မလုပ်ချင် မကုန်ချင်ဖြစ်ပြီး အမြဲလိုလို မောပန်းနေလို့ပါဆရာ။ အခုလိုဖြစ်တာ တပတ်ကျော်ပါပြီဆရာ။ ဆေးခန်းပြဖို့ အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့် အားကိုးတကြီးအကူအညီတောင်းရတာပါဆရာ။ သားဦးကိုယ်ဝန်ဆိုတော့ တခုခုဖြစ်မှာစိုးရိမ်လို့ပါဆရာ။ သောက်ရမည့် ဆေးကိုညွှန်ကြားပေးပါဆရာ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေဆို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသောဆေးသာ သောက်ခွင့်ရှိပြီး တခြားဆေး သောက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားဆရာ။သမီးဝမ်းချုပ်သောကြောင့် မြန်မာဝမ်းမှန်ဆေး (ဆရာမိုး ရှောက်တလုံး) နှင့် ဦးချိန်တီ အစာကြေဆေးကို သောက်ပါတယ်ဆရာ။ ကိုယ်ဝန်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါသလားဆရာ။ သမီးကိုယ်ဝန်က တလမပြည့်သေးပါဘူးဆရာ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးဖြစ်တဲ့ အိုဘီမင်ကို ကိုယ်ဝန်ဘယ်အချိန်ကနေ ဘယ်အချိန်ထိသောက်ရပါသလဲဆရာ။ အဖြူဆင်းတာက ကိုယ်ဝန်ရှိမှာတော့ မသိပါ။ ယာ-မယား မသိပါ။ အနံ့ဆိုး-မဆိုး မသိပါ။ များလဲမများ၊ ယားလဲ မယားရင်တော့ ဆေးမလိုလောက်ပါ။ အလွန်ဆုံး Metronidazole ကို တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၅ ရက် သောက်ရင် ပျောက်ပါမယ်။ ခင်ပွန်ဆီကနေ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တာကိုယ့်ဆီကူးတာဆိုရင်တော့ Doxycycline တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၅-၁ဝ ရက်ပါသောက်ရမယ်။
Prenatal capsule/Tablet ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးဆိုတာ နာမည်နဲ့လာတာဆိုရင်လဲသောက်နိုင်ပါတယ်။ တခြားဆေး မလိုလောက်ပါ။ အလွယ်ဆုံးက သံဓါတ်အားဆေး + ဗီတာမင် ဘီ + ဖေါလစ်အက်စစ် ၃ မျိုးတွဲသောက်ရမယ်။ ဖေါလစ်အက်စစ်ကို တနေ့ ၁ ပြားသာသောက်ပြီး ကျန် ၂ မျိုးကို တနေ့ ၂ ကြိမ်သောက်ရတယ်။ Folic acid ဆေးပြာကို ဖတ်ပါ။ တနေ့မှာ 0.5-1.0 mg ထက်မပိုပေါစေနဲ့။ mg ဆိုတာအသေအချာဖတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ရင့်လာလို့ ကြွက်တက်ာဖြစ်ရင် ကယ်လ်စီယမ်ဆေးပြားလဲ သောက်သင့်တယ်။
Ferrous sulfate or Ferrous fumarate သံဓါတ်အားဆေးက ဝမ်းချုပ်တတ်တယ်။ ရေ-အရည်များသေားသောက်၊ အသီးအရွက်များများစားတာနဲ့ပြင်နိုင်တယ်။။ မြန်မာဆေးတွေမှာ အငန်ပါတာများတယ်။ သွေးတိုး မတက်ရင်တော့ သောက်နိုင်ပါတယ်။ စွဲသောက်သလိုတော့ မကောင်းပါ။ ဝမ်းဆိုတာ အကျင့်ဖြစ်တယ်။
Sun, Feb 24, 2013 at 3:45 PM
ကျနော်နဲ့ ကျနော်ကောင်မလေး အတူနေခဲ့တာကြာပါပြီ။ နောက်ဆုံးနေခဲ့တာက ၄ လကျော်လာက်ကြာပါပြီ။ အရင်က သူကိုမေးတုန်းက အတူနေပြီး နောက်လ ရာသီလာတယ်လို့ ပြောတယ်။ အခုနောက်ဆုံး ၂ လဆက်တိုက် ရာသီမလာဘူးဖြစ်နေတယ်။ ရာသီမမှန်တာလား ဘာဖြစ်တာလည်း မသိဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏများကို ပြောပြပေးပါ။ (ဥပမာ -ပျို့အန်တာလိုဟာမျိုး နောက်ဘာတွေဖြစ်တတ်သေးလည်း ဆရာ) သူကတော့ ပျို့အန်တာတွေဘာတွေ မရှိဘူးပြောပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း သူက နည်းနည်းလည်း ၀လာတယ်။ အသက်က ၂၅ နှစ်ပါ။၇ရာသီလာအောင်သွေးဆေးလည်းသောက်ပါတယ်။
သေချာအောင် ဆီးစစ်ပါ။ စာ ၂ ပုဒ်ပို့ပါတယ်။
Pregnancy and Morning sickness ကိုယ်ဝန်ရှိစ အိပ်ရာထရောဂါ Pregnancy Tests (1) ကိုယ်ဝန် ရှိ-မရှိ စမ်းသပ်ခြင်း Sun, Feb 24, 2013 at 8:40 PM
ကျွန်တော်က အသက် ၂ဝ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော့်ကောင်မလေးက ကျွှန်တော့်ထက် ၄ နှစ်ကြီးပါတယ။ ကျွန်တော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ်လောက်က အတူနေခဲ့ကြပါတယ်။သူအခု ရာသီမလာတာလည်းကြာပြီ။ ခါတိုင်းဆို ရာသီပုံမှန်မလာရင် ဆေးထိုးပီးတော့ ရာသီလာအောင် လုပ်ပါတယ်။ အခုအကြိမ်ဆေးထိုးထားတာတောင် ရာသီမလာသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ကိုယ်ဝန်ရှိသွားမှာအရမ်းစိတ်ပူမိပါတယ်။ အခုအချိန်တားဆေးသုံးရင်ကော မှီသေးလား။ ကျွန်တော့အနေနဲ့လည်း
သူ့ကို လပကထပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်လို့ပါ။ ဆက်ဆံပြီး တစ်ပတ် ၁ဝ ရက်လောက်နေမှ တားဆေးသုံးလို့ကော ရနိုင်သေးလား ဆရာ။
အချက်အလက်တော့ မပြည့်စုံပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိ သေချာချင်ရင်တော့ ဆီးစစ်ပါ။ ဘယ်နှစ်ရက်နောက်ကျနေလဲ မသိရပါ။
ရှိနေတာအတွက်တော့ မကူညီနိုင်ပါ။ ဆေးပညာ သုတအတွက် ဆရာ့ဆိုက်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Sun, Feb 24, 2013 at 8:51 PM
ကျွန်တော့နာမည် (့) ပါ။(အသက် ၂၅)၊ (့)ကပါ။ ကျွန်တော့မှာ ချစ်သူ မိန်းကလေး ရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၂ လက စေ့စပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ကောင်မလေးက လစဉ် ၇ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း ရာသီလာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘယ်နေ့တွေမှာ အတူတူနေရင် ကိုယ်ဝန်ရတတ်ပါသလဲ ခင်ဗျာ။ နောက်ပြီး အတူတူနေပြီးလျှင် မိမိ ကိုယ်ကိုယ် အားမရှိ သလိုလို လမ်းလျှောက်ရတာ ဒူးမခိုင်သလို ဖြစ်ဖြစ် နေတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အတူတူ နေပြီးလျှင် လုပ်ဆောင်ရမည့်ကိစ္စများနှင့် ဖြည့်စွက်အစားအစာ ဆေးဝါးများအား မှီဝဲ သင့်ပါလဲ။
Calendar method ပြက္ခဒိန်နည်း Mon, Feb 25, 2013 at 10:57 AM
I have seen the following document titles from your Q and A over 18 Reading page. I also would like to read. Could you please send these documents to me?
• Abortion Complications ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲများ http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/04/abortion-complications.html
• Abortion Pills ဖျက်ဆေးတွေအကြောင်း http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/abortion-pills.html
• Abortion Q and A (1) မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန် အမေး-အဖြေများ (၁) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/unwanted-pregnancy-q-and-1.html
• Abortion Q and A (2) မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန် အမေး-အဖြေများ (၂) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/unwanted-pregnancy-q-and-2.html
• Medical abortion (1) ကိုယ်ဝန်ကို ဆေးသုံး ဖျက်ခြင်း (၁) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/04/medical-abortion-1.html
• Medical abortion (2) ကိုယ်ဝန်ကို ဆေးသုံး ဖျက်ခြင်း (၂) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/medical-abortion-2.html
• Medical abortion (3) ကိုယ်ဝန်ကို ဆေးသုံး ဖျက်ခြင်း (၃) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/medical-abortion-3.html
• Medical abortion (4) ကိုယ်ဝန်ကို ဆေးသုံး ဖျက်ခြင်း (၄) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/05/misoprostol.html
Mon, Feb 25, 2013 at 9:05 AM
သမီးအသက်က ၂၃ နှစ်ပါဆရာ။ ၂ဝဝ၈ နှစ်လောက်က nursing student ဘဝမှာ hapatitis B Vaccine ထိုးဖို့ HBsAg စစ်ကြည့်တော့ (+) ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဆရာ။ HBV အကြောင်းသိချင်လို့ Lab တစ်ခုမှာလဲ ၆ လလောက်လုပ်ခဲ့ ဘူးပါတယ်ဆရာ။ liver function test တွေလဲ မကြာမကြာစစ်ကြည့်ပါတယ်။ normal range မှာပဲရှိပါတယ်ဆရာ။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်နဲ့ အသည်းအားဆေးသောက်နေပါတယ်။ viral load တော့ မစစ်ကြည့်ရသေးပါ။ HbeAg လဲ non reactive ထွက်ပါတယ် ဆရာ။ သမီးက အခု (့) ဆေးရုံမှာ တာဝန်ကျပါတယ်ဆရာ။ သမီးသိချင်တာက အလုပ်လုပ်ဖို့ အတွက် သင့်မသင့်ပါ။ နောက်တစ်ခုက အိမ်ထောင်ပြုသင့်မသင့်ပါဆရာ။ အိမ်ထောင်ဖက်က ကာကွယ်ဆေးထိုးထားခဲ့ရင် မကူးဆက်နိုင်တာ သေချာပါ့မလားဆရာ။ အတတ်နိုင်ဆုံး ဘယ်သူ့မှ မကူးစေချင်တာပါဆရာ။ သမီးချစ်သူကိုလဲ ဘီးပိုးရှိနေတာ မပြောပြဖြစ်သေးပါဘူး။ အတတ်နိုင်ဆုံးအကြံပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ။
ဘီပိုးအကြောင်းလဲ သိထားမှာပေါ့။ လိုရင်ဖတ်ဘို့ လင့်ခ် တွေ ပို့လိုက်ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း ကူးစေမဲ့လမ်းကြောင်းတွေက သွေးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုအပြင် မွေးဖွါးလမ်းလဲပါတယ်။ အသေအချာကာကွယ်နည်းတွေလဲရှိထားပါတယ်။ အတူနေဘက်၊ ကလေးမီးဖွါးရင်၊ အလုပ်ခွင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ တိတိကျကျရှိထားပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ ဆရာဆုတောင်းပါတယ်။ အဓါက စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာပါ။
• Hepatitis အသဲရောင်ခြင်း အမျိုးမျိုး http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/03/hepatitis-symptoms-hepatitis-hepatitis.html
• Hepatitis A, B, C, D, E, G အသဲရောင်ရောဂါများ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/01/hepatitis-b-c-d-e.html
• Hepatitis B အသဲရောင် (ဘီ) ပိုး http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/04/hepatitis-b.html
Mon, Feb 25, 2013 at 9:04 AM
I hereby attached the following to get the urgent help from you, please. The liver specialist will advise you for proper treatment. The results show you have liver problem.
Wed, Feb 27, 2013 at 12:57 PM
ဆရာ နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့ နာပေးပါရှင်။ ကျွန်မက ကျွန်မအမျိုးသားနဲ့ ဆက်ဆံပြီးတိုင်း Levo 72 ကိုပဲ အမြဲသုံးခဲ့ပါတယ် တစ်လ နှစ်ခါလောက်ပေါ့ ဆေးမထိုးရဲလိုပါ အဲ့အကျိုးဆက်တွေလားမသိဘူး ဒီလ5ရက်နေ့လောက် ရာသီလာပြီးတာကို ဒီလ 20 ရက်လောက်ကစပြီး အများကြီး မဆင်းပေမယ့် လက်နဲ့ ထိလျှင်ပေကျံလာပါတယ် နည်းနည်းစီပေါ့ ဆရာ အဲ့ဒါအခုထိပါပဲ ဆရာ သူက pad ခံစရာမလိုပဲ အခုလိုနည်းနည်းစီ ဆင်းနေတာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာ အရမ်းကြောက်နေလို့ပါ တစ်ချက်လောက်ဖြေကြားပေးပါဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ
Wed, Feb 27, 2013 at 2:36 AM
ကျွန်တော့်အင်္ဂါမှာထူးခြားမှူရှိလို့ပါဆရာ။ အခုဆိုရင် လိင်ပျော်မိခဲ့တာ ၈ လလောက်ကြာသွားခဲ့ပါပြီဆရာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လကတော့ ကိုယ်ပေါ်မှာပူတာ(အရေပြား) ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဆေးစစ်တော့လည်းဘာမှမရှိ။ ၂ ခါစစ်ပါတယ်။ ၂ ခါလုံး HIV ၊ ဆစ်ဖလစ် မရှိပါဘူးဆရာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သတိထားမိတာက ကျွန်တော့်အင်္ဂါထိပ်အရေပြားက အရောင်နည်းနည်းပြောင်းပါတယ်။ အရင်ကစိတ်ဖြေတာမှာ ကြမ်းတမ်းသွားမိလို့လားမသိပါဆရာ။ ပွတ်တိုက်မှူကြောင့် အင်္ဂါထိပ်အရေပြားမှာ အဲ့လိုဖြစ်တာလားမသိပါ။ အမည်းရောင်အစက်လေးလည်း အင်္ဂါထ်ိပ်အောက်နားမှာ ပေါ်ပါတယ်။ နောက်သတိထားမိတာက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လခွဲလောက်ကစပြီး မနက်ခင်းအိပ်ယာနိုးရင် ညအိပ်ဘောင်းဘီမှာ အဖြူစက်လေးတွေတွေ့ပါတယ်။ အစက သုတ်ရည်လို့ထင်မိတာပါ။ ဒါပေမယ့်အခုရက်ပိုင်း သတိထားမိတာက ပုံမှန်နေ့လည်ဘက်လည်း စို့စို့လေးဖြစ်နေပါတယ်။ မနက်ခင်းနိုးရင်တော့ အဖြူရောင်အရည်လေးတွေ ခပ်ပြစ်ပြစ်တွေ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်တာပါလဲဆရာ။ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီ၊ ဆစ်ဖလစ်လည်းမရှိတော့ တခြားဟာများလား။ တကယ်လို့ ဂနို ဆိုရင်ကော စိုးရိမ်ရပါလားဆရာ။ ကုသရင် ဘယ်လောက်ကြာနိုင်ပါသလဲ။ စိုးရိမ်တာက နောက်ပိုင်းအိမ်ထောင်ပြုရင် လက်တွဲဖော်ကိုထိခိုက်မှာစိုးလို့ပါခင်ဗျာ။ အခုတော့မကောင်းတာမှန်သမျှ အကုန်ရှောင်ပါတယ်ဆရာ။ Penile Lesions (1) ကျားအင်္ဂါ အနာများ (၁) Penile Lesions (2) ကျားအင်္ဂါ အနာများ (၂) Penis Life Cycle ယောက်ျား-အင်္ဂါ အသက်ကြောင့် ဘယ်လိုပြောင်းလာသလဲ
Wed, Feb 27, 2013 at 9:33 AM
ကျွန်တော် အမည်က (့)။ အသက်က ၄၇ နှစ်ပါ။ ကျွန်တော်က ဝမ်းအမြဲချုပ်ပါတယ်။ သွားရင်လည်း နည်းနည်ပဲသွားတယ်။ ဖြစ်တာလည်း ကြာပြီ ၆နှစ်လောက်တော့ ရှိပြီဆရာ။ ဝမ်း မမှန်ဘူ ဆရာ။ တခါတလေကျရင်လည်း ဗိုက်က အီနေတယ်။ ကားစီးရင် ပိုဖြစ်တယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ပြတော့ အလ်ထွာဆောင် ရိုက်ခိုင်းတယ် အလ်ထွာဆောင် ရိုက်တော့ ညာဘက် ကျောက်ကပ်မှာ ရေအိပ် တွေ့ တယ်လို့ ပြောတယ် ဆရာ။အခုတော့ မစိုးရိမ်ရသေးဘူလို့ ပြောပါတယ် နောက်ကြီးလာရင်ခွဲရမယ်လို့ ပြောပါတယ်ဆရာ။ကျွန်တော် သိချင်တာက ဘာကြောင့် ရေအိက်ဖြစ်တာလည်း ဆိုတာရယ် ဒီရောဂါက စိုးရိမ်ရလားဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ဘယ်လို ကုသရမလည်း ဆေးသောက်တာနဲ့ပျောက်ကင်း နိုင်လား ဆရာ။နောက်ပြီကျွန်တော်မှာ ကလေး ၂ယောက်ရှိပါတယ်။အိမ်ထောင်ရေး သုခ လည်း အပြည့်အဝ မရပါဘူ။ အိမ်ထောင်ရေး သုခ မပြည့်ဝတာ ရေအိပ် နဲ့ဆိုင်ပါ့သလား ဆရာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
ဒီမေးခွန်းကို တခါဖြေထားဘူးတယ်။ ဆရာသိချင်တာကို ပြန်မေးတာ ပြန်မဖြေသေးပဲ မေးခွန်းသာ ပြန်လာလို့ မဖြေနိုင်သေးပါ။
Wed, Feb 27, 2013 at 4:30 PM
ဆရာရေးထားတဲ့ ပြက္ခဒိန် တွက်နည်းအရ ရာသီမလာခင်(7)ရက် နဲ့ လာပြီး(7)ရက်မှာ ဆက်ဆံရင်ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူးလို့ရေးထားပါတယ် စိတ်မချရမှု(5%)ရှိတယ်လို့လည်းရေးထားပါတယ်ဆရာ။ ရေးထားပုံအရဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေက မရှိသလောက်ပေါ့နော်ဆရာ။ကိုယ်ဝန်မရတာသေချာသလောက်ပေါ့။မတော်တဆကိုယ်ဝန်ဆိုတာဘာကြောင့်ရတာလဲဆရာ။မျိုးဥထွက်တာစောသွားလို့လား? ဘာကြောင့်မတော်တဆဖြစ်တာလဲသိချင်ပါတယ်ဆရာ?ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော့်ကောင်မလေးဒီနေ့ဆက်ဆံမိပါတယ်ဆရာ။ရာသီကမနေ့ကမှပြီးတာပါဆရာ။Ecee2သောက်ဖို့လိုမလားဆရာ။အဲ့တာလေးကျွန်တော့်ကိုအကြံပေးပါဦးဆရာ။်
စာထဲမှာပါနေပြီးသားပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆိုတာ ရာသီနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ မျိုးဥထွက်တာနဲ့သာဆိုင်တယ်။ မျိုးထွက်တာကို မစမ်းရင်မသိပဲ ရာသီက သိတယ်။ မျိုးဥထွက်တာလဲ တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြတာကို ရေးထားပါတယ်။
ရာသီလာရက်ရဲ့ ရှေ့ ၇ ရက်၊ ရာသီလာပြီး နောက် ၇ ရက်တွေမှာ အတူနေတာ စိတ်ချရတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဒါက အကြမ်းပြောကြတာသာ ဖြစ်တယ်။ လေ့လာမှုလုပ်ထားတာကိုသာ ရေးပါရစေ။ ရာသီတလတိုင်းမှာ ကိုယ်ဝန် မရနိုင်တဲ့ရက်တွေက ၂ ပိုင်းရှိတယ်။ ရာသီ မလာခင် တပိုင်းနဲ့၊ ရာသီလာပြီးတပိုင်း။ ဒါလဲ အရပ်ပြောဆန်တယ်။ ဆေးပညာအရ ပြောရရင် မ-မျိုးဥ မထွက်ခင်နဲ့ ထွက်ပြီးလို့ ပြောပါတယ်။ မ-မျိုးဥကသာ ကိုယ်ဝန်ရစေတာမို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီသွေးဆင်းတာက ကိုယ်ဝန်နဲ့ တိုက်ရိုက် မပတ်သက်ပါ။ နည်း ၂ နည်း ရေးပါမယ်။
(၁) Standard Days Method (ဂျော့ခ်ျတောင်း) တက္ကသိုလ်က လုပ်ထားတဲ့နည်းဖြစ်တယ်။
• ရာသီတလဟာ ၂၆ ရက်ကနေ ၃၂ ရက်အထိရှိသူ အမျိုးသမီးတွေ သုံးနိုင်တယ်။
• ၁ ကနေ ၇ ရက်အတွင်းမှာ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူး။ (ဒီရက်တွေထဲမှာ ရာသီဆင်းနေတဲ့ရက်တွေလဲ ပါနေတာကို သတိပြုပါ။)
• ၈ ကနေ ၁၉ ရက်အတွင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်။
• ၂ဝ ရက်ရဲ့နောက် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူး။ ဒိနောက်မှာ ရာသီလာမယ်။ လာနေတုံးလဲ မရနိုင်ဘူး။ ဒိနောက် ၁ ကနေ ၇ ရက်ဆိုတာပြန်ရောက်သွားပြီ။
• စိတ်မချရမှု ၅% ရှိတယ်။